न्यादी हाइड्रोपावरको आईपीओ बाँडफाँड हुने मिति तोकियो (कहिले ?) – OnlinePahar
२८ माघ २०७७, बुधबार ११:५९ Basanta Khanal	0 Comments	#IPO_Result
न्यादी हाइड्रोपावरको साधारण सेयर (आईपीओ) यही साताको शुक्रबार बाँडफाँड हुने भएको छ । कम्पनीले शुक्रबार आईपीओ बाँडफाँड गर्ने गरी प्रि–अलटमेन्ट सम्पन्न गरेको छ । आईपीओको बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आईएमई क्यापिटलले धितोपत्र बोर्डसँग आईपीओ बाँडफाँडको अनुमति माग्दै पत्र पठाइसकेको छ ।बोर्डबाट स्वीकृत आएपछि क्यापिटलले शुक्रबार बाँडफाँड गर्ने तयारी थालेको हो । न्यादीले असोज १५ गतेदेखि प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित २२ लाख कित्ता साधारण सेयर बिक्रीमा ल्याएको थियो । जसमध्ये कम्पनीका कर्मचारी र सामूहिक लगानी कोषलाई छुट्याएर बाँकी बसेको २० लाख ९२ हजार ५०० कित्ता सेयर सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस्: आज बुधबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य बढेको छ । सोमबार प्रतितोला ९१ हजार ३०० रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य आज बुधबार प्रतितोला ९१ हजार ४०० रुपैयाँमा कारोबार हुने नेपाल सुनचाँदी व्यावसायी महासङ्घले जनाएको छ । सोमबारको तुलनामा आज बुधबार सुनको मूल्य प्रतितोलामा १०० रुपैयाँले बढेको हो । महासङ्घका अनुसार आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला ९० हजार ९०० रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ । सोमबार १ हजार २२५ रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी आज १० रुपैयाँले बढेर प्रतितोला १ हजार २२५ रुपैयाँमा कारोबार हुने महासङ्घले जनाएको छ ।
← रोजगारीका नयाँ अवसर , यस्तो छ अनलाइनबाट कमाउने तरिका !
लुम्बिनी प्रदेशमा ३६ हजार हेक्टर खेतको धानबालीमा क्षति →
लकडाउन खुकुलो पार्ने सरकारको तयारी, जोखिम अझै टरेको छैन – स्वास्थ्य मन्त्रालय
२८ माघ २०७७, बुधबार ०९:०४ Basanta Khanal	0